Filtrer les éléments par date : lundi, 14 janvier 2019
lundi, 14 janvier 2019 20:44
Sambava: Zaza menavava nigogogogo nitomany irery teo akaikin-dreniny maty tao anaty trano mihidy
Ny marainan'ny zoma 11 janoary 2019 teo nanaitra ny manodidina ny naheno zaza menavava nitomany tsy nanam-pitsaharana tao anaty trano mbola mihidy.
Rehefa nandre izany ny manodidina dia nanapa-kevitra fa hosokafana ny trano, kanjo loza inona no niseho fa mitomany teo anatrehan'ny reniny efa maty ity zaza vao valo volana nahaterahana ity.
Mpivahiny ireto ary hatreto mbola tsy fantatra iza no fianakavian'izy ireo fa manana anarana hoe Nirina, 30 taona eo, ity reny namoy ny ainy tao an-trano foana teto Mahatsara Fokontany Antohomaro.
Efa nalevina omaly ny razana fa ny zaza kosa dia mbola ny mpifanila-bodirindrina no honena ka nandray an-tanana vonjy maika ny zaza.
Efa tonga teny ny polisim-pirenena nijery ny zava-misy.
lundi, 14 janvier 2019 15:02
Fizahantany: Sambo vaventy iray mitondra mpizahatany 150 isa
Avy any Tolagnaro ity sambo lehibe na « paquebot » ity, ary nigadona teto Morondava androany tamin’iny enina ora maraina. Hitsidika ny alan’ny Kirindy sy Allée des Baobabs ireto mpizahatany ireto, izay teratany amerikana ny ankamaroany, fa misy Frantsay sy Sinoa.
Iray andro ihany no haharetan’ny dian’izy ireo eto Morondava.
Morondava: Mpiasan’ny Radio Fanasina, naratra notafihin’ny jiolahy mitam-piadiana
Lehilahy iray, mpanentana fandaharana « Ino koa ro tagny » ao amin’ny Radio Fanasina (Don Bosco) eto Morondava no naratra voafira famaky. Nisy jiolahy nanafika tao an-tranony tao Bemanonga alina. Lasa tamin’izany ny firavaka volamena sy ny vola tao an-trano.
Anjakan’ny tsy fandriampahalemana ao amin’ity Kaominina Bemanonga ity tato ho ato.
lundi, 14 janvier 2019 14:53
Ikopa: Nitsoraka namono tena ilay vehivavy
Tokony tamin'ny mitatao vovonana teo, nisy vehivavy mody nipetraka teo amoron'ny barazy Ikopa Antananarivo, tsy nanampo ny rehetra fa tampoka teo dia nitsoraka teo andrefan'ny barazy izay misy rano be miodina vokatry ny fisotonan'ny moteran'ny Jirama, mampiakatra ny rano ho ao Andohanimandroseza, rano fisotron'Antananarivo Renivohitra.
Tsy nisy sahy niditra ny vatan-dehilahy fa mahery loatra ny rano, sady efa avo be vokatry ny rotsakorana maro be andro vitsy izay, maty ilay vehivavy natopan'ny rano.
Raha ny resaka teny an-toerana, dia vokatry ny adim-piainana no mety anton'izao famonoana tena izao.
lundi, 14 janvier 2019 10:38
Fiainana Amerikanina tsy maka lagy
Naharitraritra ihany nipetrahako tany Amerika, Etat 15 teo no hitako tany.
Maromaro ny zavatra nanaitra ahy momba ny fiainandreo tany, mety misy ny niova kely amin'izao fa amin'ny ankapobeny dia:
- Tsy ankandanja entana ny fiaramanidina, valise 2 no droit, ny 3e valise na firy lanjany eo na firy no mandoa excédent de bagage tamin'ireo compagnie nandehanako rehetra. Anisan'ny sangany ny United Airlines, apetrako fahatelo hatrany ny Air Madagascar manerantany izay hitako, ankoatran'ny tsy fanajana fotoana.
- Misy tsipika mavo be izay ny faritra andraisana olona eny amin'ny seranam-piaramanidina, faritra tsy azo hitsahina raha misy olona eo alohanao, fa miandry eo ianao. Masika ireo amin'io, hiarovana ny tsiambaratelon'ny olona eo alohanao.
- Fadio ny mitondra entan'olona tsy fantatra, fa zava-doza any, sao hibizina bagage tsy feno.
lundi, 14 janvier 2019 10:08
Fahasalamam-bahoaka: Raikitra ny Fanaovam-baksiny miaro amin'ny kitrotro
Nanomboka androany ary haharitra hadimiana, 14 ka hatramin’ny 18 janoary 2019, ny Hetsika fanaovam-baksiny faobe miaro amin’ny aretina kitrotro karakarain’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Ny zaza rehetra 9 volana ka hatramin’ny 9 taona no tsinjovina manokana ary tanjona ny ahavitana farafahakeliny vaksiny ny 95% amin’izy ireo.
Distrika miisa 25 ao anatin’ny Faritra 13 eto Madagasikara no hisantarana izany dia Ambatondrazaka, Amparafaravola, Moramanga, Toamasina I, Toamasina II, Maevatanana, Marovoay, Mahajanga I, Antalaha, Morondava, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I, Antsirabe II, Ambositra, Fianarantsoa I, Toliara I, Tsiroanomandidy, Arivonimamo, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana, Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano ary Avaradrano.
Hisitraka ny hetsika ny distrika miisa 41 hafa amin’ny volana febroary 2019 ary ny distrika miisa 48 ambiny amin’ny volana aprily 2019.
lundi, 14 janvier 2019 10:03
Toetr'andro: Tsy hisy fiforonana rivodoza ato anatin'ny telo andro ho avy
Hiatona kely ihany koa ny rotsak'orana eto Analamanga ny alatsinainy sy talata araka ny tombana nataon'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro.
Fahasalamana: Hanomboka anio alatsinainy ny hetsika fanaovam-baksiny faobe fanefitry ny kitrotro
Haharitra dimy andro, 14-18 janoary, ny fanaovam-baksiny faobe fanefitry ny kitrotro ho an'ny zaza 9 volana hatramin'ny 9 taona.
Distrika miisa 25 no hanatanterahana izany amin'izao fiandohana izao. Hiitatra amin'ny Distrika hafa amin'ny febroary sy martsa.